Paradox Inozivisa Stellaris: Nyeredzi Dziri Kure, Iyo Nyowani Rongedza Nenyaya Nyowani | Linux Vakapindwa muropa
Paradox yatakashandisa kumazita makuru, akadai saStellaris, ayo ari kuwanikwawo kuGNU / Linux, hazvo, ikozvino yaburitsa pasuru nyowani ine nyaya dzakagadziridzwa uye nedzimwe nhau. Yakatumidzwa zita Stellaris: Nyeredzi Dziri Kure nayo nzvimbo yedu yekutamba ichawedzerwa, hazvina kumbotaurwa nani. Iye zvino tichava nedzimwe nyaya nepakeji ino yemuchadenga nzira yemutambo iyo yanga ichinyatso kubudirira.
Chokwadi ndechekuti Stellaris yaive zita rakakuraAsi zvaida zvimwe zvirimo sevashandisi vazhinji vakadzokorora kakawanda. Zvishoma nezvishoma Paradox iri kukuita kuti ufare nemhando iyi yekuburitswa, ikozvino kwauya iyi pack nyowani izere nemanzwiro ekuwedzera uku kunakidza. NaStellaris: Nyeredzi dziri kure isu tichawana kuwedzerwa neakawanda ezve maficha dai isu takanga tatopererwa nenzvimbo muStellaris basic package. Imwe yezvinhu zvitsva ndeye kuvhura kwe magedhi matsva emuchadenga izvo zvinotisvitsa kune mamwe magaraxia akange ambovharirwa, saka zvichave zvinonakidza kuti uzviwane, kuongorora matsva matsva asina kuongororwa ezuva nemamwe nyaya dzekutaura. Tichava nezvakawanda zvisizvo zvitsva uye zviitiko zvevasayendisiti vane hushingi kuti vacherechedze uye vaongorore kuti vawane zvishamiso zvakavanzwa nemakwara enzou. Tichawana zvakare hunyanzvi hutsva nenzvimbo dzakakosha kuita colonize, uko kwatinozotarisana nezvakasarudzika zvisikwa zvakakura zvinokura munzvimbo dzekunze.
Pasina kupokana, yakawanda ye zvimwe zvirimo Izvi zvinoita sekunakidza uye isu tichafanirwa kuyedza Stellaris: Kure Nyeredzi. Kana iwe uchifarira, unogona kushanyira Paradox chitoro, kubva kwaunogona kuwana zvese zviri zviviri Stellaris sezvazvakaita neizvi zvitsva kuwedzera. Saka ndinokukurudzira kuti uedze kana usati watove. Kubva pane izvi zvinongedzo iwe unowana zvakare riine ruzivo rwakadzama nezve zano revhidhiyo mutambo uye mavhidhiyo kuti uone wekutanga-ruoko izvo zvauchazowana usati wautenga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Paradox inozivisa Stellaris: Nyeredzi Dziri Kure, paketi nyowani ine nyaya nyowani
Bertin Osborne akadaro
Mutambo uyu unonetsa segehena here ????
Pindura Bertín Osborne